About Us - More Do More IMP&EXP Co., Ltd.
Anyị factory emi odude ke Hedong ulo oru ogige nke Linyi obodo, Shandong n'ógbè. The ụlọ ọrụ nwere asambodo nke ígwè enweghị nkebi gas cylinder, ịgbado ọkụ cylinder na ọkụ na-alụ ọgụ gas cylinder. All ndị na ngwaahịa na-gbaara site GB5099, Iso9809-1, iso9809-3, na site na aka ike asambodo nke mba ikikere nzukọ TUV!
The ụlọ ọrụ na-etinye n'ime mmepụta asatọ enweghị nkebi ígwè cylinder mmepụta edoghi, abụọ mmiri mmiri gas cylinder mmepụta edoghi, dị iche iche na mmepụta ngwá ruo 100 tent eji maka na ahụ na chemical analysis, nnyocha, ule na ụdị nile nke nwere.
Enweghị nsogbu ígwè cylinder n'obosara ngwaahịa na-agụnye 140, 152, 159, 219, 232 etc na na, nwere ike na-emepụta 5-50litres nke iche iche na ụdị normalizing, tempering, na LPG, propane cylinder, ịgbado ọkụ cylinders, n'otu oge na ụlọ ọrụ nwere enweghị nkebi ígwè anwụrụ na uzuzu mkpuchi mmepụta ike.
Company bụ mgbe na akara na "ime pụrụ iche, na-eme ka mma, na-eme ka ibu, na-eme ike" azụmahịa nkà ihe ọmụma, bụ njikere ịrụ ọrụ na mba gas ụlọ ọrụ, na ndị ọhụrụ na ndị agadi ahịa ji ezi obi, Ezi imekọ ihe ọnụ, nkịtị mmepe, adabako win- mmeri, ike ga-eme n'ọdịnihu.